New Generation For Free Burma Media: အကျဉ်းသား ပေါ်တာများ လူသားမိုင်းရှင်း ကိရိယာအဖြစ် အသုံးခံနေရ
စိန်ခေါ်တယ်၊ မီဒီယာတိုက်ပွဲ။ ဒို့ တတွေ၊ သွေးမကြဲ ဆက်၍တိုက်နေမှာပဲ......
အကျဉ်းသား ပေါ်တာများ လူသားမိုင်းရှင်း ကိရိယာအဖြစ် အသုံးခံနေရ
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) နှင့် နအဖတပ်များ ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများ၌ နအဖတပ်က အကျဉ်းသား ပေါ်တာများကို လူသား မိုင်းရှင်းကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုနေကြောင်း သိရ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တ၀န်းရှိ အကျဉ်းထောင် အသီးသီးမှ အကျဉ်းသား ၆၀၀ ခန့်ကို ယင်းသို့ လူသား မိုင်းရှင်း ကိရိယာများ အဖြစ် အသုံးပြုနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (AAPP) တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်က ပြောသည်။
“ဒီအကျဉ်းသား တွေဟာလည်း လူသားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး၊ အခု စစ်အစိုးရ ကျင့်သုံးနေတဲ့နည်းက အကျဉ်းသားတွေကို သတ်နေတာနဲ့ အတူတူ ပါပဲ”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်း အချက်အလက် တိတိကျကျ ရရှိရန်နှင့် လူသားမျိုးနွယ် အပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇ၀တ် မှု ဖြစ်သောကြောင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဦးဘိုကြည်က ပြောသည်။
ထို့သို့ မိုင်းရှင်းကိရိယာများ အဖြစ် အသုံးခံနေရသည့် အန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်လို သောကြောင့် မကြာသေးခင်က အကျဉ်းသားပေါ်တာ ၁၂ ဦးခန့် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့နယ် ဘက်သို့ တိမ်းရှောင်လာကြကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ လကုန်ပိုင်းက ခေါ်ဆောင်လာသော မကွေးတိုင်း ပခုက္ကူထောင်မှ ၎င်းအပါအ၀င် အကျဉ်း သား ၃၀ ခန့်သည် ထိုသို့ မိုင်းရှင်းခိုင်းမှု ကြုံခဲ့ရသည်ဟု အကျဉ်းသားပေါ်တာ တဦးဖြစ်သည့် ကိုသောင်းဌေးဦး အသက်၂၈ နှစ် ကလည်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကိုသောင်းဌေးဦးက"ကျနော်တို့ က ပခုက္ကူထောင်ကနေ ငွေမပေးနိုင်လို့ရှေ့တန်းကို အပို့ခံရတဲ့လူတွေပါ၊ ပခုက္ကူထောင် က အယောက် ၃၀ ပါ တယ်၊ ရှေ့တန်းမှာ စစ်ပစ္စည်းတွေ၊ စားနပ်ရိက္ခာတွေ ထမ်းရတဲ့အပြင် ထမင်းချက်ရတယ်၊ ရေခတ် ရတယ်၊ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးလို့ စစ်သားတွေ ကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက် ကောက်ပေးရတယ်၊ အဆိုးဆုံးကတော့ မိုင်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေဆိုရင် အကျဉ်းသားပေါ်တာတွေကို ရှေ့ကနေသွားခိုင်းတာပဲ မိုင်းနင်းမိတဲ့လူလည်း မနည်းဘူး၊ ဒါကြောင့် ဒီဘက်ကို အရဲ စွန့်လာရတာ"ဟု ပြောပြသည်။
ယမန်နေ့က ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီခရိုင် ဖလူးဒေသ ပလောတပို့ တပ်စခန်းမှ ကိုသောင်းဌေးဦးအပါအ၀င် ကိုတင်ဇော်မင်း ၂၁ နှစ်၊ ကိုမိုးရာဇာ ၁၇ နှစ် တို့ အကျဉ်းသား ပေါ်တာ ၃ ဦးသည် မဲဆောက်မြို့နယ် ကော်မနောင်း သို့ ရောက်ရှိလာရာ ဒုက္ခသည်အရေး ကူညီသူများက လက်ခံကူညီထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
၎င်းတို့ ၃ ဦး သည် ရဲ အပါအ၀င် ဒေသခံ အာဏာပိုင်များ၏ ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်မှုအား ပြန်လည်ခုံခံရာမှ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန် သည့် ပုဒ်မများဖြင့် ပခုက္ကူထောင်၌ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူများ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
အကျဉ်းသားပေါ်တာ ကိုမိုးရာဇာ ကလည်း"ကျနော်တို့အမေကို ရဲက အသားလွတ် ပါးရိုက်တဲ့အတွက် ဒေါသဖြစ်ပြီး ကျနော့် အစ်ကို တင်ဇော်မင်းနဲ့ ကျနော်ဝိုင်းရိုက်လိုက်တာ လက်လွန်သွားပြီး ထောင် ၅ နှစ်စီ ကျသွားတာပါ၊ ဟိုမှာလည်း အနိုင်ကျင့် ခံရ ဒီရောက်လည်း ထပ်ခံရတာနဲ့ မထူးတော့တဲ့အတူတူ သေသေရှင်ရှင် ဒီဘက်ထွက်လာဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် တာပါ"ဟု ပြောသည်။
ပခုက္ကူထောင်တွင် ရှေ့တန်း စစ်မြေပြင်သို့ အပို့ခံရမည့် အကျဉ်းသားများ အနေနှင့် ထောင်ပိုင်ကို တဦးလျှင် ကျပ် ၁ သိန်း ခန့် ပေးနိုင်ပါက ရှေ့တန်းသွားရန်မလိုဘဲ ငွေမပေးနိုင်သည့် အကျဉ်းသားများနှင့် အစားထိုးသည်ဟုလည်း ကိုမိုးရာဇာ က ဆက်ပြောသည်။
လက်ရှိ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများ၌ နအဖ တပ်များက အကျဉ်းသားပေါ်တာ ရာနှင့်ချီ အသုံးပြုမှု ရှိနေကြောင်း လည်း ကိုသောင်းဌေးဦး က ပြောပြသည်။
ယင်း အကျဉ်းသား ပေါ်တာများသည် ပခုက္ကူ ၊ မော်လမြိုင်၊ ဘားအံ စသည့် ထောင်များအပါအ၀င် နိုင်ငံတ၀န်းရှိ အကျဉ်းထောင်များမှ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
တိုက်ပွဲအတွင်း နအဖ တပ်များက အကျဉ်းသား ပေါ်တာများကို အရှေ့တွင်ထား၍ တိုက်ခိုက်မှုများကို ကြုံခဲ့ရသည်ဟု DKBA တပ်မဟာ ၅ ဖလူး ဒေသ စခန်းထိုင် စစ်ဦးစီး တတိယတန်း ဗိုလ်ကြီး စောသရီးထူးလည်း ပြောဆိုသည်။
“အကျဉ်းသား ပေါ်တာတွေကို အရှေ့က တက်ခိုင်းတယ်၊ ကျနော်တို့က ငဲ့ညှာပါတယ်၊ သူတို့ ကို ကာဗာယူတယ်၊ ကျနော် တို့ကလည်း အပစ်မဖြစ် ပစ်ရတယ်၊ သူတို့ ကျနော်တို့ ရှေ့မှာပဲ ကျတယ်၊ သိတယ်၊ ဒါ ကျနော်တို့ မကြည့်ရက်ဘူး၊ ဒါပေ မယ့် ကျနော်တို့ကလည်း မဆုတ်ပေးနိုင်ဘူး ဆိုတော့ ကျနော်လည်း ပစ်ရတာပဲ”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အကျဉ်းသား ပေါ်တာများထွက်ပြေးလာသည့် မြ၀တီခရိုင် ဖလူးဒေသ တွင် နအဖ စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် (စကခ) ၁၂ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၇ ရင်း စစ်ရေးလှုပ်ရှားလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေ နှင့် တနင်္လာ နေ့ တိုက်ပွဲကာလအတွင်း နအဖ တပ်များက DKBA တပ်များ ရှိနိုင်သည့် နေရာများသို့ လက်နက်ကြီး ကျည် ရာနှင့်ချီ၍ ပစ်ခတ်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်း လက်နက်ကြီးကျည်များ ကျရောက် ပေါက်ကွဲသည့် အတွက် ယမန်နေ့က မြန်မာမာစစ်အစိုးရကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ကန့်ကွက်စာ ပေးပို့ထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများအတွင်း နှစ်ဘက် တပ်များ ဒဏ်ရာရ ကျဆုံးမှု ရှိကြောင်း သိရသော်လည်း သီးခြား အတည်ပြုချက် ရယူ နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနေစဉ် ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် နှင့် ၈ ရက်နေ့က မြ၀တီမြို့နယ် အပါအ၀င် ဘုရားသုံးဆူမြို့နှင့် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်များတွင် စစ်အစိုးရတပ်နှင့် DKBA တပ်မဟာ ၅ တို့ တိုက်ပွဲများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် နေ့စဉ် နီးပါးတိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
မူလသတင်းရင်းမြစ် ဧရာဝတီသတင်း ပို့စ်တင်ထားသူ ngffbm တင်ရှိချိန် 1/13/2011 07:41:00 AM
အခုဘလော့ဂ်တွင် Java error ကြောင့် အပြည့်ဖတ်မရဖြစ်နေပါတယ် ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းသိပ်နားမလည်လို့ ပြင်မရသေးပါ။ထိုကြောင့် အပြည့်ဖတ်ချင်သူများအတွက် http://ngffbm.wordpress.com/ မှာသွားရောက်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ အထူးကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ngffbm Group
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;a href="http://www6.shoutmix.com/?ngffbm"&amp;amp;gt;View shoutbox&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;
အကြံပေးလိုသည်ဖြစ်စေ ၊ဆောင်းပါးများပေးပို့လိုသည်ဖြစ်စေ ၊ သတင်းများပေးပို့လိုသည်ဖြစ်စေ pray4freeburma@gmail.com , ngffbm@gmail.com ဒီလိပ်စာများကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်
ထိုင်းများ မြန်မာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခွင့် ယာယီပိတ်
ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး အနားယူတော့မလား
၁၂.၀၁.၂၀၁၁ အတွက် RFA Burmese မှသတင်းများ
၁၂.၀၁.၂၀၁၁ အတွက် DVB မှသတင်းများ
► 10 (2968)
► Dec (216)
► Nov (342)
► Oct (312)
► Sep (310)
► Aug (428)
► Jul (448)
► Jun (467)
ဗုဒ္ဓအက်ဖ်အမ် နားဆင်သူများ သို့
အစီအစဉ် ထုတ်လွှင့်သူများ အလွှဲအပြောင်းတွင် ခေတ္တ အသံပြတ်တောက် သွားတတ်ပါသဖြင့် မိမိတို့နားဆင်သော ပလေယာ (သို့) ဗုဒ္ဓအက်ဖ်အမ်ဆိုက်ကို ရီဖရက်ရ်ှလုပ်၍ ဆက်လက် နားဆင်နိုင်ပါကြောင်း။ http://www.buddhafm.net/
ကိုမိုးသီးရေးတဲ့ နာခံမှုကိုစမ်းစစ်ခြင်းစာအုပ် ကို ဒီမှာ ကလစ်လုပ်ပြီးဒေါင်းလုပ်ပါ။
BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် မနက်ပိုင်း
ဒါလေး Listen နှိပ်နားထောင်ပါ
BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် ညပိုင်း
DVB မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် နောက်ဆုံးရသတင်း
ဒါလေး Link နှိပ်သွားရောက်နားထောင်ပါ
RFA မြန်မာသတင်းများကို အသံလွှင်နေစဉ် နားထောင်ရန်
မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ရနာရီ မှ ၈နာရီ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ရနာရီ မှ ၈နာရီ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၈နာရီ မှ ၉နာရီ
ရာမည - ရေဒီယို နားဆင်ရန်၂၀၁၀
VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် စာမျက်နာအောက်ဆုံးတွင် သွားရောက်နားထောင်နိုင်ပါတယ်
အသံလွှင်ပြီးခဲ့သော ဘီဘီစီ ၊ ဗွီအိုအေ မြန်မာသတင်းများကို အောက်ဖက်တွင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်နားထောင်နိုင်ပါတယ်
BBC မြန်မာ မနက်ပိုင်းသတင်းများ
BBC မြန်မာ ညပိုင်းသတင်းများ
VOA မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၅း၃၀-၆း၃၀
VOA မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆း၀၀-၇း၀၀
VOA မြန်မာစံတော်ချိန် ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀
Radio Free Asia သတင်းများ
Useful Human Rights Websites
Human Right Foundation of Monland
Useful political websites
All Burna I.T Students' Union
Bumese Democratic Movement Association
Grass Roots Human Rights Education & Development
The National League for Democracy in UK
Burma Today Online News
Ngu Yin Pyin News
Ashinmettacara English Version
ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ ပြယုဂ် (သို့ မဟုတ်) အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အာရုဏ်ဦးမှာ ရှော့ရှိတယ် (BDCBURMA)
တရုတ်၌ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာအလုပ်သမားအဖွဲ့ စားသုံးသည့် မှိုအဆိပ်သင့်မှုကြောင့် (၆)ဦးသေဆုံး - မူဆယ် ဇွန် ၁၈ မြန်မာနိုင်ငံ မူဆယ်မြို့နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် တယ်ဟုန်ပြည်နယ်ခွဲ လုံချွမ်းမြို့နယ် ကျန်းဖုန်းမြို့အတွင်းရှိ ငရုတ...
နစ်နေမန်း( The Power of People)
Don’t Forget it! - *Don’t Forget it!* Bloodshed Bodies on the ground Monks lifeless Don’t forget their way! In the shades of Monasteries, lotus ponds, the dhama can lead ...
အများ အတွက် ပညာရေး - ဒီပို.စ်ကို ကျမကိုယ်တိုင် ပညာလိုလားသူဖြစ်ပါလျှက် အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားပြီးမှ ချရေးလိုက်ဖြစ်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်က အစိုးရကျောင်းများနှ...
အစီအစဉ် Speed Real WM MPEG ပေၝ့ဒ်ကတ်စ် ကြာမြင့်ချိန် နေ့UTC* ၀ါရှင်တန်ဒီစီ စံတော်ချိန်
တီဗွီ မြန်မာ တီဗွီ မဂ္ဂဇင်း မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၇း၀၀-၇း၃၀ Broadband 00:30:00 တနင်္ဂနွေနေ့ 0030 19:30
ရေဒီယို မြန်မာစံတော်ချိန် ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ 20kbps 01:00:00 နေ့စဉ် 1430 09:30
မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆း၀၀-၇း၀၀ 20kbps 01:00:00 နေ့စဉ် 1130 06:30
မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၅း၃၀-၆း၃၀ 20kbps 01:00:00 နေ့စဉ် 2300 18:00
မြန်မာစံတော်ချိန် ၆း၃၀-၇း၀၀ (အထူးတိုးချဲအစီအစဉ်) 20kbps 00:30:00 နေ့စဉ် 0000 19:00
Betting and winning in casinos is the ultimate in gambling. and further it can be said that quality rtg casinos